Ukugxotha, ukucaphukisa, ukuxhatshazwa njani Ukukhuthaza ukuziphatha kwentlalo yabantwana
Ngaba abantwana bancinane?
Ukuziphatha kwentlalo yabantwana kuphela kuphumelela ekudibanisaneni nabanye
Ukuziphatha kakuhle - sisona sihloko esibalulekileyo kwimfundo?
Qinisekisa ukuziphatha kwabantwana kunye nezakhono zentlalo - yintoni ebalulekileyo?
Izakhono zentlalo yikhono abantwana kufuneka bafunde kuqala. Akukho mntu uzalwe njengentlalo yoluntu, ngoko ukuthetha kunye nokufuna ukuziphatha kakuhle kwentlalo yinto ebalulekileyo yentlalo kunye nenkqubo yemfundo. Ukuziphatha kwentlalo yabantwana kuthonyelwa ngabazali nakwiimeko zentlalo yabantwana.
Ukugxotha, ukucaphukisa, ukuxhaphaza? Indlela yokukhuthaza ukuziphatha kwentlalo yabantwana
Kwintlalo yethu intsebenziswano yentlalontle kunye eyakhayo iyafunwa. Wonke umntu ulindeleke ukuba angahambisani nemithetho kuphela kodwa kunye nemigangatho nemigangatho.
Ukuziphatha kwentlalo yabantwana kunye nezakhono zentlalo kufuneka zifundwe
Ukuba awunayo, unengxaki yokujamelana nabanye abantu kwaye ngokukhawuleza ube ngumntu ongaphandle.
Ngako oko, kufanele kube ngumgomo obalulekileyo wokufundisa wena njengomzali ukufundisa umntwana wakho imithetho efanelekileyo yokusebenzisana nentlalo. Kamva, uya kuncedwa kulo msebenzi ngamaziko afana neenkulisa kunye nezikolo.
Ekuqaleni, iintsana kunye nabantwana baselula banokuzilungisa kuphela. Basabela ngendlela eqhutywayo kwaye abanako ukuhlaziya iimfuno zabo. Kule ngongoma, ootitshala kunye neentlalo-ntsapho bakhulume nge-egocentrism enjengomntwana.
Kwabantwana abancinci, ihlabathi lixhomekeke kulo ngokwabo. Kodwa oku akwenzi nto ngokuzingca: umntwana omncinci akafundile ukuqonda iimfuno zabanye kunye nokuziphatha ngokufanelekileyo. Ukongezelela, ayikwazi ukubonakalisa ezenzweni zabo kunye nemiphumo yabo. Umzekelo, umntwana oneminyaka emibini ubudala akaqhelekanga ukuba unetyala leminye iphoso. Akusaqondwa ukuba ibangela intlungu kumlingani wakhe. Isazela kwisimo sokuziphatha asikho kule minyaka.
Ukwenza izinto zibe zibi nakakhulu, ukuba ulwimi alukwakhiwa ngokwaneleyo njengendlela ebaluleke kakhulu yentlalo yokusebenzisana. Imfundo, ukuqhubeka kwengqondo, ukuphuhliswa kwengqondo kunye nentlalo kunye namava ngamnye ekusebenzelaneni nabanye abantwana kunye nabadala banceda umntwana wakho wandise izakhono zakhe zentlalo.
Iingcaphephe kunye nokuqwalaselwa kwabantwana ziye zafakazela ukuba ukuziphatha kwentlalo kufuneka kufundwe kwasebuncinaneni.
Ukuziphatha kwentlalo yabantwana kufuneka bakhuthazwe
Abantwana abakhulayo ekuhlaleni kwabantu bafumana kunzima ukuhlawulela ukungabikho kwamava okufunda kwintlalo kunye noonxibelelwano kamva kuphuhliso lwabo.
Ngoko ke, kubalulekile ukuba umntwana wakho uqhagamshelane naye kunye nabanye abantwana. Ngokomzekelo, tyelela iqela lokudlala okanye wenze okuthile kunye neentsapho ezinobungane rhoqo. Impembelelo yokufunda komntwana wakho inkulu kwaye unokufumana ithuba lokusebenzisana nabanye abazali.
I-Crèches kunye ne-kindergartens nazo zenza igalelo elibalulekileyo xa kuziwa ekukhuthazeni ukuziphatha kwentlalo. Umntwana wakho udibana nabantwana abaninzi abahlukeneyo apho kwaye ufunda ukubeka iimfuno zabo eceleni kunye nokuxazulula ingxabano ngokwakha. Ngoko ke, misela umntwana wakho kwisikhungo sokunyamekela rhoqo kwaye uncede ootitshala ukuba banomeleze intsebenziswano yentlalo ngokugxininisa ekuthotyelweni kwekhaya.
Ukuziphatha kunye nokuziphatha okuhle kwakuphakathi kweenjongo ezibalulekileyo zezemfundo kwizizukulwana zangaphambili. Kodwa ngaba ezi zixabiso zisasebenza namhlanje? Ewe, ukuziphatha kakuhle kweentlalo kubantwana kubaluleke kunanini ngaphambili.
Inyaniso kukuba ukunyaniseka kukubonakalisa intlonelo kwabanye. Ukongeza, wonke umntu ufuna ukuphathwa ngenceba. Ngako oko, imilinganiselo efanelekileyo isona sihloko xa kuthethwa kwizakhono zentlalo kunye nokuziphatha kwentlalo.
Ukuba uxabisa ukuziphatha okulungileyo, kufuneka ubonise oku kumntwana wakho ukusukela ekuqaleni. Ngokubhekiselele ekuziphatheni kwabo, abantwana baxhomekeke kuqala kubazali babo. "Ukufunda ngokwemodeli" ligama elisetyenziswe kwiigumbi zemfundo.
Khuthaza umntwana wakho ukuba asebenzise iincwadana ezimnandi ezinjengokuthi "nceda" kwaye "siyabonga" kwaye wenze njalo ngokwakho kunokwenzeka. Kamva, unokuchaza isizathu sokuba kubalulekile ukuba nehlonipho kunye nobungane. Ngenxa yokuba ngubani ongalandeli imithetho yezemidlalo yomdlalo, iya kuphawula. Ukuba nobuhlobo, ngakolunye uhlangothi, kunokuvula ii-floodgates - zombini ngokuzimeleyo nangasese.
Ngaphezu kwazo zonke, abantwana kufuneka bafunde indlela yokuziphatha phakathi kwabo kunye nabantu abadala. Ukwenza oku, kufuneka baqale ukufaka imithetho emininzi, njengesiqhelo sesentlalo esingafunwayo. Abantwana abancinane abayi kuqonda intsingiselo nenjongo yalo mthetho kuze kube yilapho bekwazi ukuvalela "ixhoba" labo kwaye baqonde ukuba bona abafuni ukubetha.
Ndiziphatha njani xa umntwana ephula izinto?
Ngoko, ukuba umntwana wakho uzama ukuphoqelela ithoyilo, umzekelo, njengomama okanye utata kufuneka ungenelele ngokukhawuleza kwaye unqande imeko. Tshela umntwana wakho ukuba alinde okanye abe nelinye ithoyizi. Kamva, umele ukhuthaze umntwana wakho ukuba asombulule ingxabano, afune ukunyaniseka okanye afune uncedo kubantu abadala.
Ukuba ubeka imithetho ye-intsebenziswano yentlalontle, kufuneka uqinisekise kwakhona ukuba ilandelwe. Oku kuyinkxalabo, kodwa kuyimfuneko ukuze umntwana wakho aqonde intsingiselo yakhe aze ayifake kwangaphakathi. Ukuba kuza ukulawula ukuphulwa, umzekelo, xa udlala nabanye abantwana, kufuneka uthathe ngokungqinelanayo. Umlinganiselo kule meko unokuba ngumntwana wakho angaze ameme abangani ixesha elide.
Kubalulekile ukuba uphinde ubonise indlela yokuziphatha engaphendukiyo kunye nokuphucula ukuziphatha, ukuziphatha kwentlalo kunye nodumo.
Ukugcinwa kakuhle kweekhwalithi - izilwanyana
Kutheni sishushu kwizinto ezicocekileyo? abantwana umbuzo
Iflegi yase-Australia - Iiflegi zamazwe onke
Iflegi yaseBelgium - Iiflegi zamazwe onke
Iflegi yeBulgaria - Iiflegi zamazwe onke
Iflegi yeDenmark - Iiflegi zamazwe onke
Iflegi yeJamani - Iiflegi zamazwe onke
Iflegi ye-Estonia-Iiflegi zamazwe onke
Iflegi yeFinland - Iiflegi zamazwe onke
Iflegi yeFransi - Iiflegi zamazwe onke
Iflegi yeGabon - Iiflegi zamazwe onke
Iflegi yeGrisi - Iiflegi zamazwe onke
Ibalaphu yase-Indonesia - Iiflegi zamazwe onke
I-Flag of Ireland - Iiflegi zamazwe onke
Iflegi yeItali - Iiflegi zamazwe onke